Nhọrọ Mkpuchi Mkpuchi Mkpuchi China Manufacturers & Suppliers & Factory
Nhọrọ Mkpuchi Mkpuchi Mkpuchi - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 23 Ngwaahịa maka Nhọrọ Mkpuchi Mkpuchi Mkpuchi)
PVC ngwa ngwa nkedo na-ahụ maka nchịkọta akụkọ
PVC ngwa ngwa nkedo na-ahụ maka nchịkọta akụkọ Site n'ịmụ ihe site na nkà mmụta sayensị ndị mba ọzọ na ijikọta uru nke ngwaahịa ụlọ na otu ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụ isi otu n'ime ngwaahịa ndị dị elu na-emepụtaghị onwe ya .Ọ nwere ọrụ nke imeghe na mmechi ngwa ngwa, rụọ ọrụ arụmọrụ, ịchekwa ike, igbochi anwụnta, ifufe...
Mmeputa Mkpuchi Fabriclọ Mkpuchi Mmepụta Ahụhụ Ọsọ
Ire ọkụ PVC Mkpuchi Fabrickwà mgbochi
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Ọnụ ụzọ ọsọ dị elu na-abawanye ụba maka ndị na-emepụta na ndị ọrụ n'otu n'otu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. May nwere ike ịhụ ọnụ ụzọ ọsọ ọsọ kwa ụbọchị, Mana ị gaghị ejide n'aka ihe mere ịchọrọ ya, ọnụ ụzọ dị elu na-enye nkwenye kachasị mma na usoro mmepụta, na-ebugharị, chekwaa...
Nnukwu ụlọ nche mkpuchi ọsọ ọsọ
Gbasaa Aluminom Alloy High Speed ​​Door Kedu ihe bụ njedebe nke ọnụ ụzọ dị elu? 1) Ogwe mmiri Alloy Alloy na ikiri windo maka akụrụngwa
Mpụga na imepụta mbata PVC mkpuchi ọnụ ụzọ
Mpụga na imepụta mbata PVC mkpuchi ọnụ ụzọ Ọnụ ụzọ eletrik PVC nke Hong na- eme ka ego dị elu dịkwuo elu site n'ibelata ọnụ ọgụgụ ikuku nke nwere ike ịgbanahụ oge ọ bụla ọnụ ụzọ meghere ma mechie. N'adịghị ka ọnụ ụzọ dị iche iche nke na-esite n'okike, ụzọ a na-agbanwe agbanwe na ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ ndị ọzọ...
PVC mkpuchi elu ọsọ na-agbanye ọnụ ụzọ
Min. Nhazi: 1-2 Set/Sets
PVC mkpuchi elu ọsọ na-agbanye ọnụ ụzọ PVC High Speed ​​Roller Door bụ nhazi dị mkpa na ihe dị oké mkpa maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke oge a na akụrụngwa akụrụngwa na-arụ ọrụ iji mee ka arụmọrụ rụọ ọrụ ma belata ume ike. Ọ bụ n'ụzọ pụrụ iche des IGN FA ned ebelata oge st ute erial eruba, nchekwa na ntụkwasị obi....
Ọnụ Ụzọ Ákwà Mkpuchi Mkpuchi Crystal Crystal
Ọnụ Ụzọ Ákwà Mkpuchi Mkpuchi Crystal Crystal Atụmatụ: (Crystal ala ụzọ & Ụlọ ahịa ala ụzọ) - Akara nke kachasị - ngosi nwere ike ịhụ mgbe ụlọ ahịa na-emechi --Nke nchekwa - iji daa mmeghe ọ bụla zuru oke - A na-eji ígwè ọrụ rụọ ọrụ maka ngwa ngwa ngwa ngwa ma kwatuo ọrụ. Mgbochi kpọmkwem kpọmkwem - nso ike ígwè -...
Oghere Mkpuchi Rhino Mgbidi
Oghere Mkpuchi Rhino Mgbidi Kedu ihe bụ isi nke nchara ígwè na-emechi ụzọ? Hongfa Automatic door ụlọ ọrụ na-enye dị iche iche nke ọnụ ụzọ. Oghere nke nchekwa Aluminom na-ekpuchi ọnụ ụzọ bụ otu n'ime ụdị ahịa kachasị mma. Ọ bụghị nanị na imeghe na mmechi ngwa ngwa, ike dị mma, na-eguzogide ifufe, ma nwekwara ike...
Ogwe Mkpuchi Ogwe Mpempe ígwè nke Ime Nchekwa
Ogwe Mkpuchi Ogwe Mpempe ígwè nke Ime Nchekwa Isi atụmatụ: Hongfa Automatic door ụlọ ọrụ na-enye dị iche iche nke ọnụ ụzọ. Oghere nke nchekwa Aluminom na-ekpuchi ọnụ ụzọ bụ otu n'ime ụdị ahịa kachasị mma. Ọ bụghị nanị na imeghe na mmechi ngwa ngwa, ike dị mma, na-eguzogide ifufe, ma nwekwara ike imebi ohi, mara...
PVC mkpuchi akwa ọsọ Roller shutter ọnụ ụzọ
PVC nnukwu ọsọ ụzọ ngwa ngwa ọnụ ụzọ PVC ọnụ ụzọ dị elu na-ekpuchi ọnụ ụzọ dị mkpa bụ usoro dị mkpa na ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke oge a na akụrụngwa ịkwakọba ngwá ọrụ iji mee ka arụmọrụ rụọ ọrụ ma belata ume ike. A na-emepụta oge dị mkpirikpi maka ngwa ngwa ngwa ngwa, nchekwa na ntụkwasị obi. Ewezuga...
Mkpuchi Elu Nkuku Dị Elu
Mkpuchi Elu Nkuku Dị Elu 24 HOURS AD ada Okporo ụzọ dị elu nke ọnụ ụzọ ámá - Ịmepụta profaịlụ aluminom maka otu njikọ nke ụzọ, ụlọ abụọ-akwa, imepụta pụrụ iche, tinye na mpempe akwụkwọ. Dị mfe ma mara mma, iguzogide nrụgide siri ike. A na-eji ihe nkedo rụọ ọrụ dị iche iche na-emepụta ihe dị iche iche, na-adịgide...
Ọnụ Ụzọ Mkpuchi Mkpuchi Ikuku Iji profaịlụ aluminom maka otu njikọ njikọ ụzọ, ntọala abụọ-akwa, ihe pụrụ iche, na-etinye n'ime mpempe akwụkwọ. Dị mfe ma mara mma, iguzogide nrụgide siri ike. A na-eji ihe nkedo rụọ ọrụ dị iche iche na-emepụta ihe dị iche iche, na-adịgide adịgide ma na-adị mfe. A na-eji egwu aluminụ...
Oghere Mkpuchi Oghere Ọnụ Ahịa
Oghere Mkpuchi Uzuzu Uzo Ntughari Uzo di ka ndi a: Oghere ọnụ ụzọ: galvanized nchara na ụfụfụ n'ime Ihe: okpukpu abụọ oyi akwa na PU n'ime Akụrụngwa na egwu: 2,5 mm thickness galvanized steel Ngwa nchebe: ngwaọrụ nchedo airbag Na-egbochi ịda mbà: gbochie ọnụ ụzọ ahụ daa Nchịkwa njikwa zuru oke: ọ dị mma, a...
Aluminium nche mkpuchi mechie ụzọ
Aluminium nche mkpuchi mechie ụzọ Ịgba ọsọ ọsọ, nchekwa na amart nwere ike ịhazi gị site na gị chọrọ.Obudata dị ike. n'otu ebe dị elu na-aga n'ihu, ọkụ nwere ike ịrụ ọrụ karịa 1000 ugboro
Nhọrọ Mkpuchi Mkpuchi Mkpuchi Ọnụ Ụzọ Mkpuchi Mkpuchi Ikuku Oghere Mkpuchi Mkpuchi Akpụkị mkpuchi mkpuchi akwa Okporo ụzọ na-ekpuchi ekpuchi Oghere na-ekpuchi ikpuchi Stozọ Nchekwa mkpuchi mkpuchi Chishụ Oghere Mkpuchi Nchekwa Ikuku